MCPF, Myanmar, Mandalay, Amarapura | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Home Business Categories Deals Community Advertise With Us About Us Our Guides
Mandalay Directory Myanmar Business Directory Myanmar Information & Communication Technology Guide Sayar Guide Myanmar Industrial Guide Myanmar Logistics Guide Myanmar Textile & Garment Industry Guide Myanmar Restaurant Guide Myanmar Builders Guide Myanmar Food Industry Guide Myanmar Wedding Guide Powerful Advertising Guide in Myanmar Myanmar Automobile Industry Guide Myanmar Education Guide Myanmar Health Industry Guide Myanmar Marketing Research & Development Logistics Industry in Myanmar
Sign In Home Business Categories Deals Community Advertise With Us About Us Our Guides
in ထုတျပိုးဖွညျ့ဆညျး ပစ်စညျးကိရိယာမြား
စဈကိုငျး-မန်တလေးလမျး ဘေး၊ ဧဇရပျ၊ ယခငျဒုံးပြံဂြုံစကျဝငျးအတှငျး၊, အမရပူရမွို့နယျ, မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး
02-4070034 , 09-2000311 , 09-954070034 ,
MCPF မန္တလေးလှိုင်းတွန့်စက္ကူဘူးစက်ရုံမှထုတ်လုပ်သောစက္ကူဘူးများသည်နိုင်ငံခြားစက်ကိရိယာများ အသုံးပြု၍အဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာထုတ်လုပ်ထားခြင်း၊ နိုင်ငံခြားကုန်ကြမ်းများသာသုံးစွဲထားခြင်း၊ပါကင်ဒီဇိုင်းစတိုင်(လ်)သစ်များ တီထွင်ဆန်းသစ်ထားခြင်း၊ ပါကင်ဒီဇိုင်းစတိုင်(လ်)သစ်များတီထွင်ဆန်းသစ်ထားခြင်း၊ အရွယ်အစားစုံလင်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်တွင်လှိုင်းမရှိညီညာခြင်း၊မာကျောတောင့်တင်းခြင်း၊ ပေါ့ပါးသပ်ရပ်ခြင်း၊ ရက်ချိန်းတိကျ၍ဈေးနှုန်းသင့်လျှော်ခြင်းတို့ကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်အပေါင်းတို့ကပြည်တွင်းသုံးအတွက်သာမကနိုင်ငံခြားပို့ကုန်လုပ်ငန်းအတွက်ပါ နှစ်ခြိုက်စွာ မှာယူသုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။ MCPF စက္ကူဘူးစက်ရုံသည် အမှတ်-၁၄၁၊ အေးဇရပ်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်တည်ရှိပါသည်။
MCPF မန္တလေးလှိုင်းတွန့်စက္ကူဘူးစက်ရုံမှထုတ်လုပ်သောစက္ကူဘူးများသည် နိုင်ငံခြားစက်ကိရိယာများ အသုံးပြု၍အဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာထုတ်လုပ်ထားခြင်း
ပေါ့ပါးသပ်ရပ်ခြင်း၊ ရက်ချိန်းတိကျ၍ ဈေးနှုန်းသင့်လျှော်ခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်အပေါင်းတို့ကပြည်တွင်းသုံးအတွက်သာမက နိုင်ငံခြားပို့ကုန်လုပ်ငန်းအတွက်ပါ နှစ်ခြိုက်စွာ မှာယူသုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။
MCPF စက္ကူဘူးစက်ရုံသည် အမှတ်-၁၄၁၊ အေးဇရပ်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်တည်ရှိပါသည်။
Get directions .
MMRD was founded in 1992 by U Moe Kyaw and quickly established itself asaleading market research company and publisher of the first trade directory in Myanmar – the Mandalay Directory.
Corner Of 28th St..,2nd Floor,Man Myanmar Plaza,Chan Aye Thar San Township, Mandalay, Myanmar.